अब प्रचण्डले मधेससँग होइन, जानकीसँग लभ परेको छ भन्नेछन् ...
अब प्रचण्डले मधेससँग होइन, जानकीसँग लभ परेको छ भन्नेछन् …
काठमाडौं, ५ चैत । प्रदेश नं. २ को नामाकरणको लागि चारपटक मतदान भइसक्यो । तर, प्रदेश २ ले नाम पाउन सकेन । मंगलबार चैत्र ४ गते प्रदेश नम्बर दुईको नामाकरणबारे विभिन्न प्रस्तावमाथि मतदान थियो । तर कुनै पनि प्रस्तावको पक्षमा दुर्ततिहाई पुगेन ।
प्रदेश नं. २ चारपटकको प्रयासपछाडि पनि नामविहिन भएपछि यसबारे सामाजिक सञ्जालमा रोचक बहस सुरु भएको छ ।
एक ट्वीटर प्रयोगकर्ता प्रभासराज लेख्छन्, ‘कमरेड प्रचण्ड हिजो मधेशसंग मेरो लभ परेको छ भन्ने गर्थे । अबदेखि जानकीसँग मेरो लभ पर्‍या छ भन्ने होला ।’
हुन पनि यसअघि मधेसमा झर्नासाथ प्रचण्डले आफ्नो मधेससँग लभ परेको भन्दै भाषण गर्ने गर्दथे । मधेस मुक्तिको नारा लगाउने जनयुद्धको नेतृत्व गरेका प्रचण्ड कुनै बेला पहिचानको चर्को नारा लगाउँथे ।
नेकपाले प्रदेश २ को नामाकरण जानकी राख्न प्रस्ताव गरेको थियो । यो प्रस्तावको पक्षमा ३२ मत मात्र पर्‍यो । प्रस्ताव पारित हुन प्रदेशसभाको ७२ मत आवश्यक थियो ।
अर्का एक ट्वीटर प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्, ‘जेनीका फेनहरुमा जानकीप्रति यत्रो आशक्ति किन देखिएको होला ?’ जेनी कार्ल मार्क्सकी श्रीमतीको नाम हो ।
कम्युनिष्ट समर्थकहरुमा जेनीप्रति विशेष सम्मानभाव हुन्छ । उनले अगाडि लेखेका छन्, ‘प्रदेशका नाम यसरी नै हुनुपर्ने हो भने भारतका प्रदेशको नाम राधा प्रदेश, रुक्मिणी प्रदेश, कैकेयी प्रदेश, सुपर्णखाँ प्रदेश हुन्थ्यो होला ।’
डा. बाबुराम भट्टराईले यसबारे हिन्दीमै ट्वीट सन्देश सार्वजनिक गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘नेपालको संविधानमा मधेश शब्द हुने, प्रदेशको नाम मधेश किन नहुने । हिजोका हाम्रा पूर्वमाओवादी मित्रहरु मातृका यादव, प्रभु शाह र भरत शाह कहाँ गए ? पूर्व नयाँ शक्तिका रामचन्द्र झा, रामकुमार शर्मा र महेन्द्र पासवान कहाँ गए ? कुछ तो शर्म करो ।’
गिरिशचन्द्र लालले भने प्रदेश नामाकरण हुन नससेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘प्रदेशसभाले पाएको नामाकरणको अधिकार प्रयोग हुन नसक्नु चिन्ताको बिषय हो ।’
सिरहाका नागरिक अभियन्ता तथा बौद्धिक व्यक्तित्व ज्योति दनुवारले भन्छन्, ‘निर्णायक घडीमा चुँसम्म बोल्न नसक्नेप्रति स्वभाविक रुपमा प्रश्न उठ्छ ?’
प्रभासराजले अर्को एक ट्वीट सन्देशमा भनेका छन्, ‘तीन-तीनपटक भएको त्यत्रो ठूलो मधेश आन्दोलनलाई नजरअन्दाज गर्न खोज्छन् । देशमा मधेश आन्दोलन भन्ने चिज नै भएको थिएन जस्तो गर्दछन् । मधेश, मधेश, मधेश, प्रदेश २ को नाम मधेस नै हुनुपर्दछ ।’
अर्का ट्वीटर प्रयोगकर्ता सेतेमान तामाङ असन्तुष्टि पोख्दै लेख्छन्,’सशस्त्र द्वन्दकालमा जातीय पहिचानको नाममा हजारौं सोझासिधा नागरिकले बलिदान दिए तर आज पहिचानको आधारमा नामकरण गराउने बेलामा पिके दाहालले धोती लगाएर छाडे । आखिर राजनितीक खेल त उहीँ दाहालले जाली बुनेर सत्ता प्राप्ति गर्नको लागि मात्रै भए । सन्दर्भ- मधेस प्रदेश, नेवा-ताम्सालिङ, तामुवान ।’
स्मरणीय छ- मंगलबार भएको मतदानमा मधेश नामाकरण प्रस्तावको पक्षामा पनि दुईहिताई पुगेन । मधेसको पक्षमा ६० मत मात्र पर्‍यो जुन दुई तिहाईको लागि १२ मत कम हो ।